3 - BookCubicle
ဘယ်လိုလွတ်မှာလဲ? Velen တွေးသည်။ သူခဏတော့ စိတ်ပျက်သွားသော်လည်း သူ့အား စိတ်ချင်းဆက်သွယ်ခဲ့သော အလင်းရောင်သက်ရှိ အကြောင်းပြန်တွေးလိုက်သည်။
သူတို့လာမှာပါ။ သေချာပါသည်။ အချိန်တွေ ကုန်လာလေလေ သူတို့ကို ရှာတွေ့ဖို့ အခွင့်အရေး နီးလာလေလေဖြစ်သည်။
တချို့ကတော့ မရောက်သေးပါ Talgath ပင် မရောက်သေး။
သူယုံကြည်ရသည့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်သော Restalaan က သူ့အား ပြုံးပြသည်။
" သူတို့ မကြာခင် လာတော့မှာ " သူက စိတ်ချလက်ချ ပြောသည်။
Velen ခေါင်းညိမ့်လိုက်သည်။ Restalaan မှန်သည်။ ယခင်က မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခု ရန်သူများဖြစ်နေသည့် Kil'jaden နှင့် Archimonde တို့ ဤမျှရဲရင့် ကောင်းမွန်သည့်
အစီအစဥ်ကို သိသည့် လက္ခဏာ လုံးဝမပြသေး။ သူတို့သည် သူတို့ရမည့် စွမ်းအားတွေအကြောင်းကိုသာ သည်းကြီးမည်းကြီး စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
Saegeras အား မယုံရန် သတိပေးခဲ့သော အသိစိတ်ကပင် ယခု သူ့စိတ်ကို တစ်ဖန် လှုံ့ဆော်နေပြန်သည်။ တစ်ခုခုမှားနေပြီ။ သူ ခြေလှမ်းမိနေကြောင်း သတိထားမိသွားသည်။
ထို့နောက် သူတို့ ရောက်လာကြသည်။
Talgath နှင့် အခြားသူများ ပြုံးပျော် ဝှေ့ယမ်းကာ မတ်တတ်ရပ်လိုက်ကြပြီး Velen ကမူ စိတ်သက်သာစွာ သက်ပြင်းချလိုက်သည်။ သူကိုင်ထားသည့် ကျောက်တုံးမှ
စွမ်းအင်တစ်မျိုးက သူ့တစ်ကိုယ်လုံးပျံ့နှံ့သွားသည့်အခါ Velen က သူတို့ကို တွေ့ရန် ဆင်းလိုက်သည်။ ကျောက်တုံး၏ သတိပေးချက်ကို သတိထားမိသွားသောအခါ သူ့အပြာရောင် လက်များက ၎င်းကို တင်းတင်းဆုပ်မိသွားသည်။ စိတ်ထဲမှ အငွေ့အသက်များက ဆိုးရွားလာလွန်းသောကြောင့် Velen ဒူးများ ခွေကျသွားသည်။
Sargeras စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကြောက်ဖို့ကောင်းသော တပ်ဖွဲ့ကို စတင်ဖန်တီးနေပြီဖြစ်သည်။ Kil'jaden နှင့် Archimonde စကားကို နားယောင်ရလောက်အောင် ရူးသည့် သို့မဟုတ် ယုံကြည်နိုင်လွန်းသည့် Eredar များအား ခေါ်ဆောင်၍ Velen အာရုံထဲတွင် မြင်ခဲ့သော man'ari အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပစ်နေသည်။ သူ့ မျက်စိရှေ့၌ပင် ပုံစံမျိုးစုံရှိ man'ari ထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရုပ်အပြောင်းခံရထားရပေပြီ။ ကျောက်တုံးကြောင့်သာ မဟုတ်လျှင် တော်တော်အခြေအနေဆိုးကာ နောက်ကျသွားသည်အထိ သူ သိလိုက်မည်မဟုတ်ပေ။
လုံးဝ နောက်ကျပြီးသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
သူထိတ်လန့်စွာဖြင့် Talgath ကို ကြည့်လိုက်သည်။ ဆိုးရွားသောအငွေ့အသက်များသည် သူ ယုံကြည်ခဲ့ရသည့် Talgath ဆီမှလည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား ထွက်လာနေသည်။
သူ့နောက်တွင်မူ တိုက်ခိုက်ရန် ချောင်းနေသည့် မကောင်းဆိုးဝါးအုပ်လိုက်ကြီး။ သူ့နှလုံးသားထဲမှ ဆုတစ်ခုကို သူရင်တစ်ခုလုံး ကြေမွသွားအောင် နက်နက်နဲနဲတောင်းလိုက်မိသည်။
ငါတို့ကို ကယ်ပါဦး K'ure!
အမြင်ခံလိုက်ရမှန်းသိသွားသော man'ari များသည် လူသတ်ဖို့ဆာလောင်နေသည့် သားရဲများကဲ့သို့ တောင်ပေါ်ကို ကုတ်ကပ်တက်လာကြသည်။ man'ari များ၏ အမဲဖျက်မှုကိုခံရခြင်းထက် သေခြင်းက သူရော သူ့နောက်လိုက်များအတွက်ပါ ပိုကောင်းကြောင်း Velen သိသည်။ ကြံရာမရသည့်အဆုံး သူ ata'mal ကျောက်တုံးကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ကောင်းပင်ပေါ်သို့ ပစ်ခွင်းလိုက်သည်။
ကောင်းကင်ဘုံက တံခါးဖွင့်ပြီး ကြိုလိုက်သကဲ့သို့ အလင်းတန်းတစ်ခုက ရုတ်ချည်းပေါ်လာသည်။ ထိုအလင်းက ကျောက်တုံးအား တိုက်ရိုက်ကျကာ Velen ကြည့်နေစဥ်အတွင်းပင် အဖြူအလင်းရောင်မှာ ရောင်စဥ် ၇ခု အဖြစ်ဖြာထွက်သွားသည်။ သူကိုင်ထားသည့် ကျောက်တုံး အစိပ်စိပ်ဖြာထွက်သွားစဥ် နာကျင်မှုကို စူးခနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။
ချွန်မျှနေသော အစွန်းများက သူ့လက်ကို လာစူးသည်။ သူ ပင့်သက်ရှိုက်လိုက်ပြီး ကွဲအက်နေသော ကျောက်တုံးကို အလိုအလျောက် လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများ
လေထဲတွင် ရစ်ဝဲနေကာ တစ်ခုစီသည် ပြည့်စုံသည့် စက်လုံးများ ဖြစ်သွားကြသည်။ ယခင်က အဖြူရောင်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့သော အလင်းရောင်မှာ ရောင်စဥ်ခုနစ်ခု အဖြစ် ဖြာထွက်သွား၍ စက်လုံးများ ဖြစ်သွားကြသည်။ ဤ အနီ လိမ္မော် အဝါ အစိမ်း အပြာ မဲနယ် နှင့် ခရမ်းရောင် စက်လုံးများသည် ထိတ်လန့်နေကြသော Eredar လူမျိုးစုများအား ချက်ချင်း ဝန်းရံထားလိုက်သည်။
ထိုအချိန်တွင်ပင် Talgath က အသိစိတ်မဲ့နေသူလို သူ့ဆီပြေးလာသည်။ သို့သော် အလင်းရောင်များ ဝန်းရံထားသည့် စက်ဝိုင်းကို ထိမိသောအခါ ကျောက်သားနံရံကို ပြေးဆောင့်လိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီး နောက်သို့ ယိုင်သွားလေသည်။ Velen ပတ်ချာလည် လှည့်ကြည့်လိုက်သော် man'ari အုပ်စုလိုက်ကြီးသည် မာန်ဖီကာ သရေများကျနေကြပြီး အစွယ်များနှင့် နံရံကို ကုတ်ကပ်တက်နေကြသည်။ နံရံမှာ အလင်းရောင်ဖြင့်သာ ကာထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းVelen နှင့် သူ့လူများကို သေချာ ကာကွယ်ပေးထားသည်။
ကျယ်လောင်စူးရှသော အသံတစ်သံကို Velen ခံစားလိုက်ရသည်။ သူအပေါ်သို့ မော့ကြည့်လိုက်သော် ယနေ့တွေ့ခဲ့ပြီးသမျှ အရာအားလုံးထက်ပင် ပိုအံ့သြဖို့ကောင်းသော အရာကိုမြင်လိုက်ရသည်။ ကြယ်ကြွေကျလာသည်နှင့် တူကာ အလင်းရောင်စူးရှလွန်းလှသဖြင့် သူ ဆက်မကြည့်နိုင်။ ထိုအရာ နီးကပ်လာသောအခါ ကြယ်ကဲ့သို့ အရာ မဟုတ်ဘဲ အစိုင်အခဲအရာဝတ္ထုတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ ၎င်း၏ အလယ်တည့်တည့်မှာ နူးညံ့၍ စက်လုံးလို ဝိုင်းနေကာ အမျှင်ကလေးများနှင့် တြိဂံပုံ ကျောက်များ ပါသည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် အာရုံတစ်ခု ပေါ်လာသောအခါ Velen လှိုက်လှဲစွာ ငိုချလိုက်မိသည်။
"ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်ုပ်ရောက်လာပါပြီ။ ဒီကမ္ဘာကို စွန့်ခွါဖို့ပြင်ပါတော့ ရှေ့ဖြစ်ဟော Velen"
ကလေးလေးတစ်ယောက် မိဘ၏ ပွေ့ချီခြင်းကို စောင့်မျှော်သလို Velen သူ့ လက်မောင်းများကို ဆန့်ထုတ်လိုက်သည်။ သူ့အထက်ရှိ စက်လုံးက တစ်ချက် လှုပ်သွားပြီးနောက် Velen ငြင်သာစွာ လေထဲသို့ ပွေ့တင်ခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ သူ လေထဲ လွင့်မျောနေချိန် အခြားသူများလည်း အပေါ်သို့လွင့်လာကာ ယာဥ် တစ်ခုဆီသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံနေရကြောင်း တွေ့လိုက်သည်။ Velen နားလည်သလောက်တော့ ယာဥ်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ၎င်းကပင် အသက်ဝင်နေသလိုဖြစ်နေသည်။ ငြိမ်သက်သော ပီတိများကြားတွင် သားကောင် လွတ်သွား၍ အော်ဟစ်ဆူညံနေသော man'ari များ၏ အသံကို Velen ကြားလိုက်ရသည်။ ယာဥ်၏ အောက်ခြေ ပွင့်သွားပြီး ခဏအကြာတွင်
Velen တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်မိလျက်သားဖြစ်နေသည်။ ကြမ်းပြင်ဟု ခေါ်ရမည်ဖြစ်သော အရာပေါ်တွင် Velen ဒူးထောက်လိုက်ကာ သူ့နောက်လိုက်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဆင်းလာကြသည်ကို စောင့်ကြည့်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီးသော် ယာဥ်၏ တံခါး ပိတ်သွားဖို့ Velen မျှော်လင့်လိုက်သည်။
ဤ သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုတစ်မျိုးနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အသားမဟုတ်သော အသားတစ်မျိုးနှင့် တည်ဆောက်ထားသည့် K'ure ၏ တန်ခိုးဖြင့် ဖန်တီးထားသည်ဟု Velen
ယူဆသော ဤယာဥ်ကို စတင် ထွက်ခွါဖို့ Velen ဆုတောင်းလိုက်သည်။ သို့သော် ထွက်ခွါရမည့်အစား Velen စိတ်တွင် တီးတိုး အသံတစ်သံကြားလိုက်ရသည်။
" ကျောက်တုံးတွေ... အရင်က တစ်တုံးတည်းရှိတာ အခု ၇ တုံး ဖြစ်သွားပြီ... အဲ့ဒါတွေကို ပြန်ရှာပါ..မင်း ရှေ့လျှောက် လိုအပ်လိမ့်မယ်..."
Velen တံခါးပေါက်မှတစ်ဆင့် ကိုယ်ကို ယိုင်၍ ကိုင်းညွတ်လိုက်ပြီး လက်မောင်းများကို ဆန့်ထုတ်လိုက်သည်။ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်သည့် အရှိန်ဖြင့် ကျောက်တုံးများက သူ့ဆီ တစ်ဟုန်ထိုးတက်လာကာ သူ့ လက်ဖဝါးများကို ဝင်တိုက်လာ၍ သူ တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ကျောက်တုံးများမှ လာသည့် အလွန့်အလွန် ပူသော အရှိန်ကို ဂရုမထားဘဲ သူ အကုန်လုံးကို ပူးကပ်ကာ စုကိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့ကိုယ်ကို နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်သည်။ သည်အချိန်တွင်ပင် ယာဥ်တံခါးသည် အစတည်းက လုံးဝ မရှိခဲ့သလို တစ်ခါတည်း ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ ata'mal ကျောက်တုံး ခုနစ်တုံးလုံးကို ဆုပ်ကိုင်ထားစဥ် သူ့ အသိစိတ်များသည် ရူးသွပ်တော့မလို အဆုံးထိ အစွမ်းကုန်
ဆန့်တန်းသွားသည်။ မျှော်လင့်ချက်နှင့် စိတ်ပျက်ခြင်း နှစ်ခုကြားတွင် Velen စိတ်မှာ အဆုံးမရှိ တုံ့ဆိုင်းနေတော့သည်။
သူ့ ရာထူးဖြစ်သော စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် နေရာမှ နေ၍ Kil'jaden သည် သူတို့၏ ကျွန်များ စုပြုံအုံခဲကာ ကုတ်ကပ်တက်နေသော တောင်ကို အတားအဆီးအပိတ်အဆို့
ကင်းကင်းဖြင့် မြင်ကွင်းကောင်းမှ ကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့သည်။ ခဏတာမျှတော့ အောင်မြင်မှု အရသာကို သူ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခံစားလိုက်ရသေးသည်။ ထိုအရသာသည် Saegeras က သူ့ရင်ထဲသို့ အစပျိုးပေးခဲ့သော ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနီးပါး ချိုမြိန်လှသည်။ Talgath က သူ့တာဝန်ကို ကျေပြွန်ခဲ့ပေသည်။
သူတို့ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်နေချိန်အတွင်း Velen လက်ထဲတွင် ata'mal ကျောက်တုံးကို ကိုင်ပြီးလျက်သား ဖြစ်နေသည်မှာ ကံကောင်းလွန်းသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။
သူ့လက်ထဲမှာသာ ကျောက်တုံး မရှိခဲ့လျှင် ယခု သူ့ အလောင်းသည် အစအန ရှာမရအောင် တစ်စစီ ဆုတ်ဖြဲခံရပြီး မြေပေါ်တွင် လဲကျနေပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော် Velen သည် လက်ထဲတွင် ကျောက်တုံးကို ကိုင်ထားပြီး ဖြစ်ကာ သတိပေးချက်များကိုလည်း ကြိုသိနေခဲ့သည်။ တစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ထူးဆန်းသော အလင်းတန်းတစ်ခုက သစ္စာဖောက်ကောင်ပေါ်သို့ ဖြာကျကာ ပတ်ပတ်လည်ကို ကာကွယ် ဝန်းရံသွားခဲ့ပြီး တစ်စုံတစ်ခုက သူတို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ Kil'jaden ကြည့်နေစဥ်ပင်
ထို ထူးဆန်းသည့် ယာဥ်ကြီးမှာ အရောင်များ တောက်လာပြီးနောက်.... ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့သည်။
သူ လွတ်သွားပြီ ! ဒီ အသုံးမကျတဲ့ သစ္စာဖောက်ကောင် ! Velen လွတ်သွားပြီ !
Kil'jaden အား လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်အနည်းကပင် စိတ်ကျေနပ် ပျော်ရွှင်မှုများ အပြည့်အဝပေးခဲ့သော man'ari များသည် ယခုမူ အံ့သြတုန်လှုပ်မှုများ စိတ်ပျက်ခြင်းများ အပြည့် ဖြစ်နေကြသည်။ သူက သူတို့၏ စိတ်အားလုံးကို ဖတ်လိုက်သည်။ သူတို့ ဘာမျှ မသိကြ။ Kil'jaden ၏ လက်အတွင်းမှ Velen ကို လက်မတင်လေးရအောင် လာရောက်
သယ်ဆောင်သွားသော အရာက ဘာပါလဲ။ ယခု Kil'jaden တစ်ကိုယ်လုံး ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်မှုဖြင့် ခိုက်ခိုက်တုန်နေပေသည်။ သည်လို အဖြစ်အပျက်မျိုးကို သူ့ သခင်က နှစ်သက်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
"အခု ဘာလုပ်ကြမလဲ " Archimonde က မေးသည်။ Kil'jaden က သူ့မိတ်ဆွေကို လှည့်ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်သည်။
" သူတို့ကို ရှာရမယ်" Kil'jaden ကြိမ်းဝါးလိုက်သည်။
"သူတို့ကို ရှာပြီး ဖျက်ဆီးပစ်မယ် ။ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ကြာမယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ကို ရှာရမယ်..."